Hiditra or hisoratra anarana mba hamoaka ny soso-kevitrao
Raha manana fanamarihana na fanontaniana momba ny Evinrude 3 HP Lightwin ianao, na tetik'asa mitovy amin'ny Tune-UP, avelao izy ireo eto ambany.
Ianao dia tsy maintsy Hiditra raha tianao ny hiala hevitra.
Afaka izao Good amin'ny kaonty Facebook.
napetraky ttravis amin'ny Mon, 09 / 25 / 2018 - 20: 54
Namaly ny Tondra-drano by Dipstick
Heveriko fa ny olana dia ...
Heveriko fa ny olana dia na ny fanjaitra sy ny seza, na ny fanitsiana ny sidina.
Manandrana manamboatra ny lozam-pandehan'ny rivotra aho ka somary midina kely izany mba hanakanana ny famokarana solika tsy ho ela.
Raha tsy miasa izany, dia hametraka fanjaitra vaovao, clip, ary seza aho. Ataovy azo antoka fa hosoloinao daholo ireo telo ireo. Ny fifangaroan-javatra eo anelanelan'ny voatango dia mety hiteraka fihetsika tsy mifanentana ary tsy miasa koa. Mety tsy mila kitapo vaovao ianao raha vao nahazo iray.
Raha manana ny nomeraon-tarehiko aho, dia hanome rohy aho. Mety izany angamba 18-7038 Sierra Carburetor Needle sy ny Seza
Tsy heveriko fa ny Jets dia hahatonga ny karba ho tondraka ny fomba nilazanao azy.
Ny feo tahaka anao dia efa teo. Aza kivy.
napetraky Dipstick amin'ny Mon, 09 / 25 / 2018 - 22: 53
Namaly ny Heveriko fa ny olana dia ... by ttravis
Torohevitra tsara. I ...
Torohevitra tsara. Navoakako ny fivoriambe, nizatra ilay pèlerin, ary nanambatra ny zavatra rehetra. Ankehitriny dia mihazakazaka tsara izy. Fahatelo ny fahatongavana. Misaotra.
napetraky ttravis tamin'ny Wed, 08 / 07 / 2019 - 01: 12
Ny haavon-tsambo anao ve, sa…
Ny haavon-tsambo anao ve, sa mety ambany kely ambany? Azonao atao ny manandrana manamboatra izany mba hahazoana antoka ny seza fanjaitra mandritra ny fomba rehetra rehefa misy solika ao anaty tsipìka. Manana sary aho amin'ny fomba fanaovako fampandrenesana. Ampiasao koa ny fanjaitra sy seza izay niaraka tamin'ny kitapo. Tokony hijanona ho tsiroaroa izy ireo.
napetraky mmdahl tamin'ny Sun, 09 / 30 / 2018 - 08: 30
Fiovam-po ho any tank solitany
Vaovao ho an'ity tranonkala ity aho ary misaotra anareo aho noho ireo vaovao tsara rehetra ireo. Miasa amin'ny Johnson CD-11 aho. Miezaka ny manova azy aho mba hiasa amin'ny tank fitondra fitaratra. Nametraka milina mpamandrihana mikuni aho ary nampiasa ny metatra 7 / 16 plug mba hahazoana pulsa. Mampiasa andian-gazy mazava aho ary hitako fa ny tsipika fanindroany dia mameno tsikelikely ny solika rehefa mandeha ny motera. Aorian'ny 5 minitra. Ny paompy solika dia miala amin'ny asa. Azoko atao ny manary ny solika avy amin'ny tsipika fanindroany ary mbola hihazakazaka indray izy mandra-pahatongan'ny safodrano hafa. Nihevitra aho fa avy amin'ny orinasa mpamono solika ny solika, saingy toa tsy mivoaka ny motera. Misy olon-kafa ve manana io olana io?
napetraky ttravis tamin'ny Sun, 09 / 30 / 2018 - 11: 13
Inona no tianao holazaina amin'ny 7 / 16 ...
Inona no tianao holazaina amin'ny metodo 7 / 16?
napetraky mmdahl tamin'ny Sun, 09 / 30 / 2018 - 13: 17
Namaly ny Inona no tianao holazaina amin'ny 7 / 16 ... by ttravis
Avelao aho hamerina izany. Nampiasa kapa misy vaksiko aho, izay inoako fa 7 / 16 ", dia mifanentana tsara izy io, mba hampiato ny iray amin'ireo valim-pifidianana rehefa vita ny fanesorana ny valizy.
napetraky ttravis tamin'ny Sun, 09 / 30 / 2018 - 23: 37
Namaly ny Fiovam-po ho any tank solitany by mmdahl
Tsy fantatro izay mety ...
Tsy fantatro izay mety hitranga. Tsy nampiasa solika mazava aho. Tsy hitako hoe ahoana no mety hameno ny tsipika tsipika raha tsy hoe mety ho ratsy ny kapilaikinao.
Fantatro fa tsy vahaolana izany, fa ny tenako ihany no nataoko ary fantatro fa maro ireo hafa no efa namoaka io fomba fanao io nandritra ny folo taona lasa izay. Tamin'ny farany, taorian 'ny fahafinaretana nandritra ny taona maro dia navoaka ny motera 5.5 satria lasa maranitra ny tombo-tsoavaly tery ambony ary tsy nahita solonanarana aho. Mikasa ny hiditra amin'ny fotoana fitrandrahana tena tsara amin'ity ririnina ity aho ary handray fehezanteny hafa.
napetraky mmdahl amin'ny Mon, 10 / 01 / 2018 - 07: 17
Namaly ny Tsy fantatro izay mety ... by ttravis
Misaotra ny fandraisan'anjara. I will ...
Misaotra ny fandraisan'anjara. Hanandrana manamboatra na manolo ny solika aho. Tsy manana tosi-drà fanindroany aho, noho izany dia tena manosika ahy hanao ity asa ity. Miaraka amin'ny tsipika an-dàlam-pamokarana tahaka izao, mety ho azoko atao ny mahita tsara kokoa ny toerana alehan'ny solika.
napetraky fabelknap tamin'ny Wed, 09 / 25 / 2019 - 08: 35
Namaly ny Misaotra ny fandraisan'anjara. I will ... by mmdahl
HI, miara-miasa amin'ny motera solika sy mitovy solika aho, ary manana olana mitovy aminy. Ny solika dia avy amin'ny lafiny fampidirana. Fantatra ve ny fanapahan-kevitra momba an'io olana io? Misaotra
napetraky boatman350 tamin'ny Fri, 10 / 12 / 2018 - 22: 01
Hey ry zalahy ao an-damosina rehefa miandry ny ampahany
Hey guys aho manana ny Lightning 3hp ary ny fotoana farany nakarako dia nanana loto ratsy ratsy. Nahazo iray vaovao aho ary nitarika voalohany ny tifitifitra voalohany. Nirotsaka aloha ny tsindry raha tsy nisy nanala ny mpamosavy dia tsy mahagaga ahy satria tsy nanomboka tamin'ny fotoana fohy (eritreritra izany?) Fa ankehitriny ny olana lehibe dia ny lohataona foibe no nokapohina ka nahazo vaovao aho ary mila fanampiana amin'ny fomba hametrahana ahy ao amin'ny fivoriana fananganana.
Misaotra ny olona rehetra faly miaraka amin'ny olona ivelan'ny trano
napetraky ttravis tamin'ny Sat, 10 / 13 / 2018 - 00: 04
Lahatsary YouTube tsara ...
Betsaka ny lahatsary YouTube tsara. Efa nanao ity dingana ity aho ary afaka miteny aminao aho fa tsy tsara! Nila fitsapana sy hadisoana be dia be aho satria ny zava-drehetra dia ny baoritra.
Miangavy anao manokana ary maka sary maro miaraka amin'ny findainao / fakantsary mba hahafahanao manosotra ny fomba hiverenany miaraka.
Mitandrema ihany koa fa mety hampidi-doza ity lohataona ity. Ataovy azo antoka fa tsy avelao handosira izy. Haniry anao hanana tasy sy tanana fahatelo.
napetraky boatman350 amin'ny Mon, 10 / 15 / 2018 - 22: 54
misaotra anao tttavis
Tsy azoko ilay izy fa tsy mora ilay izy saingy azoko an-tsaina hafa hoe inona no mety ho sarobidin'ny môtô amiko ho afaka hanome ahy tombanana. 1957 dia nanazava ny lightwin 3 tsy naverina tamin'ny laoniny fotsiny ny zavatra tsy mety dia ny loko loko
napetraky ttravis amin'ny Mon, 10 / 16 / 2018 - 08: 01
Namaly ny misaotra anao tttavis by boatman350
Manome ahy fatratra ...
Manome fahafaham-po lehibe ahy ny fahafantarako fa afaka ny hampiakatra ny môteranao ianao ary mety hiantsona amin'ny tranonkala. Na oviana na oviana ny olona iray tahaka anao dia manamboatra motera iray tranainy taloha mba hahafahana mankafy izany, mahatonga izao tontolo izao ho toerana tsara kokoa.
Indrisy fa ireo motora madinika ireo dia tsy sarobidy amin'ny vola. Ho ahy sy ny olon-kafa, dia sarobidy be izy ireo satria izy ireo dia motera mahafinaritra ho an'ny sambo kely rehetra ary tonga lafatra ho an'ny ankizy mianatra. Tsy afaka hividy zava-baovao ho an'ny under $ 800 ianao izay tsy misy afa-tsy ny kalitaon'ny Lightwin kely anao. Ny teny hoe "Tsy manao azy ireo ho toy ny taloha" dia marina. Miaraka amin'izay rehetra lazaina fa mety, azoko an-tsaina hoe afaka mahazo eo anelanelan'ny $ 300 sy $ 400 amin'ny Ebay ianao.
Raha tena tsy afaka mivarotra izany ianao, dia maniry ny hahita ny lisitra ao amin'ny fanamarihana "For Sale" ato amin'ity tranonkala ity. Azonao atao ny manao izany voalohany!
Misy maromaro mivarotra amin'ny Ebay. Ny iray amin'ireo zavatra ataoko eto, amin'izao fotoana izao, dia mametraka rohy amin'ny e-bar ny ampahany sy ny motors (an'arivony amin'izy ireo) mba hanampiana ny olona hahita izay ilainy amin'ny tetikasany. Ny fampiasana rohy eto dia manampy amin'ny famokarana vola mba hitazonana ity tranokala ity sy ny tetikasa mandeha tsy misy ny fandaniana manokana.
Tsindrio eto raha hijery ny lisitry ny motera mitovy aminao.
Mpikambana ihany koa aho Antique Outboard Motor Club, Inc. Ao koa ny lisitry ny motera mividy ary misy olona maro izay handroaka ny ranomandry manerana ny fanjakana maro haka ny anao.
Raha ny tenako, dia mahazo fahafinaretana lehibe aho amin'ny fanamafisana fotsiny sy manome sambo sy motors ho an'ny mendrika ny taranaka zandriny. Ity tranonkala ity dia mamatsy vola ampy hanohanana ny fialam-boly sy ny fahalalahan-tanana.
Na izany na tsy izany dia mendrika ny trano tsara sy ny tompony izay hankasitraka izany Lightwin tianao izany.
napetraky boatman350 amin'ny Mon, 10 / 16 / 2018 - 23: 01
Nampiasa fanampiana be dia be avy amin'ny tranokalanao aho ary faly be ny nahita izany tamin'ny fampahalalam-baovao rehetra. Nosoratako tao amin'ny pejy momba ny varotra koa ity. Manana zavatra maro aho raha mampifandanja ny lightwin ary miandrandra ny tetikasa iray hafa tahaka ny ahafahana mitazona izany amin'ny elonger ary mampiasa izany indray mandeha na indroa. Ao amin'ny tovolahy 14 iray tena izy ary mahagaga anao amin'ny tetikasanao.
napetraky ttravis amin'ny Mon, 10 / 16 / 2018 - 23: 30
Namaly ny Hey tom by boatman350
Izy E! Izaho dia hanana…
Izy E! Mety ho efa noheveriko fa efa be taona loatra ianao. Mahagaga anao ny taonanao. Ny traikefa azonao dia hanampy anao soa aman-tsara. Ny soso-kevitra tokana dia ny hampiditra ny toerana misy anao ao amin'ny fanampiana, farafaharatsiny ny tanàna sy fanjakana na code postal mba hahafantaran'ny olona raha afaka manangona izany izy ireo. Manoro hevitra anao aho hitazona ny moto ary hitady sambo mba hampidirana azy, fa izaho ihany. Maniry aho mba hamerina ny sasany amin'ireo zavatra novidiko nandritra ny taona maro. Tsy andriko ny handrenesanao ny tetikasanao manaraka.
napetraky boatman350 tamin'ny Wed, 10 / 17 / 2018 - 08: 06
Namaly ny Izy E! Izaho dia hanana… by ttravis
Misaotra anao indrindra ary ...
Misaotra betsaka anareo ary tena marina tokoa fa ny sambo nividianako dia ampiasako izany ho fanandramana bisy sy fitsangantsanganana
napetraky boatman350 tamin'ny Wed, 10 / 17 / 2018 - 08: 07
Misaotra an'io hevitra tsara io hanampiana toerana eo amin'ny dokambarotra.
napetraky thaskew01 amin'ny Mon, 11 / 26 / 2018 - 00: 01
Fanesorana ny Lightwin
Ahoana ny fomba fanesorana ny fanolorana eo amin'ny bara-dazan'ny lightwin? 1959 modely 3030 io.
napetraky ttravis amin'ny Mon, 11 / 26 / 2018 - 11: 50
Namaly ny Fanesorana ny Lightwin by thaskew01
Tsy dia betsaka loatra izany .... Esory ny kapa sy ny pistol, ny foza, esory ny fitoeran-drivotra, ary alaivo ny fanodinana. Mitandrema mba tsy ho very ny pensa.
Raha manana olana ianao dia ampahafantaro anay. Indro misy fizarana fizarana mba hahitanao ny fiaviany.
napetraky dlofthouse ny Thu, 08 / 01 / 2019 - 14: 51
Rattle? Sa misy mandondona izany? Mipetaka angamba?
Nividy Lightwin 3 tena madio be aho vao haingana. Narahiko ny fomba fanolorana fangatahana nomanina ary nohamariniko ny voaroaka. Toa tena voakarakara tsara ilay môtô ka tsy noklezina na tsy tomobaka mihitsy. Nanomboka tamin'ny fisintonana fahatelo taorian'ny fitahirizana 30 farafahakeliny. Taorian'ny nandavananay kely dia nihazakazaka tamim-potoana fohy izy io satria tsy nanana rano aho. Namboatra kamiao aho mba hahafahany mihazakazaka kokoa ary alohan'ny hanombohako indray. Nandrotsaka ny mekanika throttle aho satria somary henjana. Rehefa nihazakazaka teo aho nandritra ny minitra 5 amin'ny fivoahana samihafa ary nanomboka nihazakazaka izy. Tsikariko mazava be ny feo vita teo. Tsy fantatra amiko raha izany dia feo avy any anaty motera na avy amin'ny zavatra hafa toy ny trano fonenana vao haingana. Ny hany fomba fantatro hamaritana azy dia rattle amin'ny hafainganam-pandeha ambony kokoa. Nanomboka nanahy momba ny hafanana be aho ka najanoko io, niandry minitra vitsy ary nanomboka nahare izany feo izany ihany koa aho. Amin'ny throttle ambany dia malefaka tsara. Avy amin'ny seranan'i Exhaust ny rano araka izay noheveriny fa (mihevitra aho). Mankasitraka anao aho izay mizara ny eritreritrao momba izany. Mahafaly.
napetraky ttravis tamin'ny Fri, 08 / 02 / 2019 - 14: 03
Sarotra holazaina. Horonantsary iray dia…
Sarotra holazaina. Lahatsary iray dia hanampy be dia be. Diniho ny fonon'ny motera sy ny motera ankapobeny mba hahazoana antoka fa mihatotra ny sakana rehetra. Ho azonao ny hevitra tsara kokoa momba izay hitranga raha mihazakazaka bebe kokoa ianao. Tsy hatahotra ny hamindra azy aho amin'ny farihy kely. Makà kitapo. Manantena fa tsy hilanao izany!
napetraky dlofthouse amin'ny Mon, 08 / 06 / 2019 - 16: 59
Namaly ny Sarotra holazaina. Horonantsary iray dia… by ttravis
Fametahana, mandondona, mitsentsitra
Misaotra amin'ny valiny.
Ity tranonkala ity angamba no toerana tokana ahafahako milaza izany ary hahafantatra fa ho azon'ny mpamaky daholo. Manana motor aho .... fa tsy manana sambo - LOL. Nividy ilay môtô aloha aho, tsy afaka nampita an'io akory. Ka izao, tsy maintsy ataoko foana ny hanandrana azy hapetraka ao anaty kitapoko feno kitay feno rano. Raha ny momba ilay tabataba dia noraisiko ny toro-hevitrao ka nitazako izay rehetra mitady paty. Nosintako ilay recoil ary nanamarika fa malaina ny nut afovoany. Rehefa natoroko miverimberina ilay mekanika dia toa io no mety ho tompon'antoka. Ny tranobe dia toa manamafy ny feom-borona toy ny lakolosy. Rehefa nanandrana nandoro izany indray aho, dia nivaky ilay lohataonan'ny recoil ka tsy maintsy manavao anao rehetra aho rehefa mamily an'io aho. Mahafaly.
napetraky ttravis tamin'ny Wed, 08 / 07 / 2019 - 01: 05
Namaly ny Fametahana, mandondona, mitsentsitra by dlofthouse
Aleo ny manapaka ny lohataona…
Aleo ny manapaka ny lohataona mandritra ny fitsapana. 18-6501 Fanavaozana ny lohataona an'i Johnson / Evinrude Mitandrema ary aza avela hidina aminao io zavatra io.
Manana motera be lavitra noho ny sambo aho. Misy foana boaty afaka mindrana.
napetraky Aahpoo tamin'ny Fri, 08 / 09 / 2019 - 17: 39
1955 Johnson 5.5hp
Manam-potoana hahitana fanoloana ny lovia famafazana fitaratra ao amin'ilay motera ambony. Ny mpitarika rehetra dia ho mahafinaritra!
napetraky ttravis tamin'ny Fri, 08 / 09 / 2019 - 19: 45
Namaly ny 1955 Johnson 5.5hp by Aahpoo
Ataoko ao anatin'ny iray volana ireto.
Vao iray volana izay no napetrako ireo
napetraky FelixMcC tamin'ny Sun, 08 / 11 / 2019 - 15: 35
Mandeha moto ..
Misaotra voalohany amin'ilay tranokala mahavariana izay nanampy ahy tamin'ny famerenana indray ny EKRude 67 3hp Evinrude. Afaka nanorina indray ny rafitra fangalan-jiro aho ary izao dia mihazakazaka ny môtô.
Momba ny olana manaraka. Ankehitriny manana ny mandeha môtô aho dia mahatsikaritra fa mafana! - mafana loatra ny mametraka ny tananao. Raha flick rano ao an-doha aho dia hirehitra izany. Nanaraka ny fomba fanaonao aho ary nanintona ny lohany, nanarona ny seranan-tsambo, ary nanasaraka ny lohan'ilay hery avy amin'ny vondrona ambany kokoa. Madio tsara ireo lalana manodidina ny lohan'ny cylinder. Nandia ny lalana avy amin'ny fantsona fidirana rano varahina mankany amin'ny fivoahana aho ary hita ho mazava daholo ny rehetra. Rehefa mihodina ny rano moto aho avy eo amin'ny lavaka ao amin'ny unit ambany. Aiza koa no mety hidina ny fikorianan'ny rano? Inona no tokony hotsidihiko manaraka?
napetraky ttravis tamin'ny Sun, 08 / 11 / 2019 - 22: 35
Felix. Ny hany fantatro dia izay ao io lahatsoratra io. Betsaka ny olona mahalala zavatra maro, ary ny tiako holazaina lavitra noho ny amiko aza https://www.facebook.com/groups/2126052714312567/ Manoro hevitra an'io vondrona facebook io aho ho toerana hanontanian'ny olona sasany mahalala izay resahany.
Amiko dia tsy maintsy maharitra aho amin'ny fandehanana an'io lalan-drano ....... Tom
napetraky FelixMcC amin'ny Mon, 08 / 12 / 2019 - 08: 01
Namaly ny Mandeha moto. by ttravis
Misaotra amin'ny valiny. Heveriko fa nofantariko io. Nanana ny laharana ambany aho tamin'ny fotoana iray talohan'ny nampidirako ilay môtô. Rehefa niverin-dalana io aho dia tsy fantatro fa ny rano fantsona dia tokony hiditra ao anaty fitoerana / seranan-tsambo ao amin'ny trano mpanondrana. Tsy nihetsika ny manodidina ny rano ny rano. Nosarahako ny lohan'ilay herinaratra avy amin'ny vondrona ambany dia nandatsaka rano tao anaty rano ary avy eo nitsoka rivotra manindrona mba hanery ny rano amin'ny faribolana mba hahazoana antoka fa afaka mivezivezy ny rano.
Manantena ny hizaha izany indray aorian'ny asa aho. Mirary soa aho
Misaotra ny rohy facebook !!!
napetraky ttravis amin'ny Mon, 08 / 12 / 2019 - 20: 18
Môtô kely kely mahafinaritra io…
Izay ilay môtô kely kely mahafinaritra mba hiasa. Mirary anao ho tsara vintana. Matoky aho fa hahazo ilay asa ianao. Ankafizo ny vondrona Facebook. Lazao azy ireo fa nalefako aho! Ilay lehilahy nanomboka io tranonkala io dia nanomboka nanamboatra môtô mitovitovy amin'izany amin'ity tranonkala ity. Mirary soa ary araraoty hatrany izahay.
napetraky FelixMcC amin'ny Mon, 08 / 13 / 2019 - 09: 45
Namaly ny Môtô kely kely mahafinaritra io… by ttravis
Eny - motor kely mahafinaritra io mba hiasa. Nosoloiko ny elanelan-tsolika vita amin'ny masinina voatondro, alohan'ny hamonoako azy io indray satria nampandre feo fotsiny izy ireo. Ny menaka mivoaka dia tahaka ny fotaka fotsy !! Mieritreritra aho fa mety ho tany am-boalohany izany. Notsiparitako indray izany izao, mandeha tsara izy ity ary tsara sy tsara. Vonona ny hanaovana ny andiam-panadinana amin'ny lakilako amin'ity faran'ny herinandro ity.
Mivangongo lehibe io nianatra ny fanamboarana satria mora ny mitantana sy miasa. Nentiko amidy tao an-tokotanin'ny $ 50 taona vitsy lasa izay ary avelao hipetraka mandritra ny fotoana fohy. Farany, nodioviko sy nanangana indray ny karbera, nametraka teboka vaovao, coil sy condensers, nosoloiko ny tsipika fitobian-tsolika, nanadio ny tanky, nanadio ny làlam-pandehanana rano (nanapahana ny entako ho an'ny lohany, porteur ary lohany). ary nanova ny diloilo amin'ny kojakojan'ny prop. Nandany vola $ 150 ny singa sy ny fitaovana ary noho izany dia tetikasa goavana sy tsy lafo izy io ary manana motera kely kely aho hitondra ahy any amin'ny kianja filokana amin'ny fararano. Misaotra ny fanoratana ny tetik'asa. Tsy ho azoko mihitsy ity lavitra ity raha tsy nisy ny torolalana nomenao.
Heveriko fa voafatotra aho ary hitady motera kely hafa hanamboarana - Te-hanana ny tanako amin'ny 2hp Johnson tamin'ny fiandohan'ny 70 tany am-boalohany….
napetraky ttravis ny Thu, 09 / 05 / 2019 - 13: 44
Namaly ny Fihetseham-po feno by FelixMcC
Faly aho fa ianareo…
Faly aho fa nahomby ianao. Antenaina fa afaka ampandehanana io fiara io ho an'ny taranaka ho avy.
napetraky ArTam2019 tamin'ny Wed, 08 / 14 / 2019 - 10: 52
Paint sy decals
Vao manomboka ny famerenako amin'ny Lightwin 3HP izay heveriko fa avy amin'ny 1952-1954 satria ny serial dia 3012. Tiako kokoa ny fampahalalana momba ny kaody fandokoana na ny anaran'izy ireo ary misy ve izany? Hankasitrahako ihany koa ny torohevitra momba ny toerana ahazoana fanapahan-kevitra amin'izany?
napetraky ttravis tamin'ny Wed, 08 / 14 / 2019 - 18: 02
Namaly ny Paint sy decals by ArTam2019
Fantatro fa misy izy ireo.
Tsy mbola namerina môtô mihitsy aho. Tiako fotsiny ny hampandehanan'izy ireo ary hampiasa azy ireo. Hoy izany, fantatro ny andian'olona betsaka izay maniry an'io. Zahao ity Facebook Group. Azoko antoka fa hanampy anao ireo.
napetraky prob6789 amin'ny Mon, 08 / 27 / 2019 - 22: 47
Fanontaniana momba ny tariby spark.
Voalohany, misaotra ny tranokala lehibe sy ny loharano lehibe. Hitako fa manana tariby ratsy ratsy ny taratra Evinrude lightwin 3hp ahy. Afaka mividy tariby ve avy amin'ny eBay na AutoZone (raha toa ka mifanaraka amin'ny làlana izy ireo) ary mampiasa izany? Sa mila mividy manokana? Heveriko fa tariby ny tariby ary tsy misy dikany izany. Diso ve aho?
napetraky ttravis ny Thu, 09 / 05 / 2019 - 13: 40
Namaly ny Fanontaniana momba ny tariby spark. by prob6789
Avy amin'ny tetik'asa 5.5 HP nataoko:…
Avy amin'ny tetik'asa 5.5 HP:
Jereo Spark plug tariby sy Manolo raha ilaina - Na dia misy aza ny stator anao, dia fotoana tsara hijerena ny fantsoran'ny plastika anao amin'ny fotoana rehetra amin'ny akanjo na korontana. Raha ny zava-misy, ny endrik'ireo takela-bolako dia voatsodrano ka tsapako fa fahafahana tsara ny manolo ny tambatra fanenitra. Taorian'ny fividianana be dia be, hitako fa tsy ampy ny fametavetana taratra 22-inch izay nivarotra tao amin'ny NAPA. Nifindra tany amin'ny toerana antsoina hoe Tractor Supply aho ary nividy setroka fanindronana 4 ho an'ny manodidina $ 10. Mariho fa misy fahasamihafana eo amin'ireo zana-tsokajin-drakitra efa antitra izay ampiasaina amin'ny fiara antitra sy ireo motera sambo ary ireo "tariby" karbaona vaovao izay ampiasaina amin'ny fiara androany izay miorina amin'ny famoahana elektronika izay miteraka fihenan'ny radio sy ny toy izany. Mila manana filaharam-be matevina ianao eo amin'ireo motera ireo. Ny fampiasana ny fantsikao fanindroany toy ny lamandy ary mamela ny lavany iray fanampiny, dia notapahako ny lava-tànana vaovao ho an'ny halavany ary namily azy ireo teo amin'ny lalana iray teo amin'ny farany ambany amin'ny takelaka stator. Tsy fantatro hoe inona ny fitsipika momba ny fanoloana ny fonosana fanenonan-tsokosoko fa izaho dia efa nahatratra taona 50, mila nosoloana izy ireo! Nolazaiko fa ny ankamaroan'ny sambo sy ny mpitrandraka harena an-tanety dia manana an'io karazana kofehy matevina matevina io ary afaka manapaka ny lavany ilainao, mametraka kapa boot sasany ary azoko antoka fa hiasa tsara izy ireo.
18-5225 Fitaovana Fantsom-barotra an-tsokosoko an-dranomasina XnUMX-XNUMX wth Fanalanjonana Magneto. (Tariby tariby fotaka)
napetraky Benlightwin tamin'ny Wed, 08 / 28 / 2019 - 23: 05
misintona hanetsika ny trangam-pitaingoana miendrika takelaka
Vao avy nihataka aho dia nisy 1959 3030 lightwin Evinrude nanaraka ny toromarika momba ny fantsom-pahalalana an-tsambo sy carb eto izay tena fisaorana! Andramo aloha amin'ny asan'ny motera kely ary avelao mihazakazaka tsara aorian'ny fanamboarana karbônina ary manolo ny zava-drehetra amin'ny coil plate plate, point ary condensers.
Na izany aza, mila voatery namatotra ny fametahana takelaka armature aho ho an'ny tànana amin'ny tendrombohitra tankina amin'ny solika. Satria rehefa misintona aho, dia mandrisika be ny tànana ary matetika any amin'ny toerana fijanonana. Ny hevitra rehetra dia ny fisolom-basy mitazona ilay lalantsara na ny soso-kevitra tokony hanamboarana azy?
napetraky Benlightwin ny Thu, 08 / 29 / 2019 - 23: 45
Namaly ny misintona hanetsika ny trangam-pitaingoana miendrika takelaka by Benlightwin
Raha misy olona hafa mitovy…
Raha misy olon-kafa manana olana mitovy dia tsy napetraka lavitra ny lalitra sy ny fofona ny kitrokely, ataovy azo antoka fa hanambatra ireo fahatapahana amin'ny marika Armature. Nisy olona tao amin'ny pejy Facebook Evinrude Johnson 3hp namaly haingana.
napetraky ttravis ny Thu, 09 / 05 / 2019 - 13: 35
Namaly ny Raha misy olona hafa mitovy… by Benlightwin
Miala tsiny, nanao fialantsasatra aho,…
Miala tsiny, miala voly aho, tsy lavitra amin'ny internet tamin'ny herinandro lasa rehefa nandefa an'ity ianao. Faly er you ianao ary misaotra ny namela fampahalalana mahasoa izay hahasoa ny olon-kafa. Tom
napetraky tunafish75 amin'ny Mon, 09 / 03 / 2019 - 19: 02
Fitaovam-piadiana amin'ny fitaovam-piadiana
Nilalao niaraka tamin'ny vaovao 1958 Lightwin 3hp aho vao nilalao. Ny zavatra iray izay tsy tsikarako dia ny fehin-tsetran'ny armature dia ny fikosoham-bary mafy ary mitafy aloka. Misy hevitra amin'izay tokony hatao hanitsiana azy?
napetraky ttravis ny Thu, 09 / 05 / 2019 - 13: 33
Namaly ny Fitaovam-piadiana amin'ny fitaovam-piadiana by tunafish75
Heveriko fa toy izao izany…
Heveriko fa toy izany dia tamin'ny alàlan'ny famolavolana mba hijanona eo amin'ny toerany ny throttle. Izany dia nosoloana ny lozisialy misy entana mavesatra lohataona izay hiverina tsy mandeha amin'ny laoniny raha toa ka avelanao ny mpandeha mpiasa. Manao ahy ny ahy.
napetraky backwater52 ny Thu, 09 / 19 / 2019 - 13: 13
3302 tompony vaovao
Manana serivisy serivisy misy anao ve ianao sa mifandray amin'ny iray?
napetraky ttravis tamin'ny Sat, 09 / 21 / 2019 - 14: 34
Namaly ny 3302 tompony vaovao by backwater52
Tsy manual service fa:…
Tsy manual service fa: https://outboard-boat-motor-repair.com/Evinrude%203%20HP%20Lightwin%20Outboard%20Boat%20Motor/Evinrude%20Johnson%203%20HP%201952-1954%20Owners%20Manual.htm
napetraky Troy Gessner tamin'ny Fri, 09 / 20 / 2019 - 14: 42
Mitahiry solika / menaka?
Vao avy namerina nanamboatra ny maodely 1966 Lightwin 3602 aho tamin'ny fanamboarana karbônina, teboka vaovao sy fampitaovana vaovao, lohataona vao manomboka amin'ny alàlan'ny ranon-dranomaso, menaka maoderina vaovao ary toy ny kambana.
Ny tahan'ny solika / menaka antsoina hoe ao amin'ny serivisy serivisy Evinrude dia 16: 1. Misy olona manana fampahalalana vao haingana kokoa mety hahafahana mampiasa zavatra hafa? Mangataka fotsiny aho satria ny sambo navisin-dranoko Tohatsu M8B dia mandray 50: 1 dia mety kokoa fa mitazona karazam-pifangaro iray.
Mazava ho azy fa izaho foana dia ny fampidiran-kevitra momba ny mpanamboatra, raha tsy misy ny data tsara dia mampiseho safidy azo ekena. Manana be dia be ny traikefa fanamboarana sy hazakazaka bisikileta 2t aho, noho izany dia azoko tsara ny maha-zava-dehibe ny tahan'ny fifangaroan-kanina.
Misy olona mampiasa faritra hafa amin'ny fahombiazana, sa misy fahazoan-dalana azo avy amin'ny Evinrude?
napetraky ttravis tamin'ny Sat, 09 / 21 / 2019 - 14: 27
Miaraka amin'ny 24: 1 na 32: 1…
Miaraka amin'ny 24: 1 na 32: 1 raha mifoka be loatra. Ny TCW3 amidiny anio dia tsara kokoa noho ny entana taloha.
Pejy voalohany «Voalohany
Previous page <Previous
Pejy ankehitriny 2
Azafady tsindrio ny eBay or Amazon rohy etsy ambony mba hanampiana antsika. Mahazo 4% na mihoatra ny iraka amin'ny EVERYTHING mividy amin'ny eBay na Amazon.com amin'ny ora manaraka 24. Ity fandaharam-pivoaran'ny Affiliate ity dia hanampy amin'ny fananganana tetikasa ho avy, fampiantranoana, fiteny, fiarovana SSL, ary fampivoarana ny tranokala tsy misy vidiny ho anao. Ny fanohanana anao dia tena ankasitrahana. (Ny rohy eBay dia vaovao. Ho hitantsika raha miasa tokoa izy.)
Voahidy ny tranonkala. Goog daholo indray!
2 herinandro lasa izay
Kaody loko hosodoko ho an'ny motera 1958 5.5 hp CDL-15?
tsy mahazo antoka ny kaody loko, fa…
resaka fiovam-pomba solika
Azafady tsindrio ny rohy etsy ambony alohan'ny fiantsenana Amazon or eBay. Tongasoa eto ny mpivarotra iraisam-pirenena
Ny tompon'ity tranokala ity dia mpikambana mirehareha AOMCI.ORG
Lahatsoratra vao haingana
18-5225 kapila elektrika fanindronika
2 volana lasa izay
061001 Michigan Aluminium Propion 13-3 / 4 x 15 (13-3 / 4 x 15) 4-Stroke
061002 Michigan Aluminium Prop (13-1 / 4 x 17) 4-Stroke
061003 Michigan Aluminium Prop (13 x 19) 4-Stroke
061004 Michigan Aluminium Propion 13 x 21 (13 x 21) 4-Stroke
335533 Michigan Ballistic Stainless Prop (13-1 / 8 x 21) 4-Stroke
335532 Michigan Ballistic Stainless Prop (13-3 / 8 x 19) 4-Stroke
335531 Michigan Ballistic Stainless Prop (13-1 / 2 x 17) 4-Stroke
335530 Michigan Ballistic Stainless Prop (13-5 / 8 x 15) 4-Stroke
063045 Michigan Fandrobana fanonerana (13 1 / 4 x 21) 4-Stroke
063044 Michigan Fandrobana fanonerana (13-1 / 4 x 19) 4-Stroke
063043 Michigan Raptor Stainless Prop (13-1 / 4 x 17) 4-Stroke
063042 Michigan Fandrobana Fandrosoana 13-3 / 4 x 15
60-70 HP Aluminium sy Stops (4-Stroke)
45- 75 HP Vita amin'ny vy tsy misy fefy ho an'ny (Fitaovam-piadiana mahery vaika sy fatrohotra)
40-75 HP Aluminum dia mitapoka lehibe (4-1 / 4 ") Gearcase sy fandroana Thru-Hub
953424 Michigan Ballistic High-Performance Stainless Steel Prop (13-1 / 2 x 24), Exhaust Thru-Hub
953422 Michigan Ballistic High-Performance Stainless Steel Prop (13-1 / 2 x 22), Exhaust Thru-Hub
85 - 140 HP Propeller ho an'ny vy amin'ny V-4 (13 Spline sy Thru-Hub)
763951 Evinrude Johnson BRP Stainless Steel Prop (13-1 / 4 x 17) 13-Spline, Thru-Hub Exhaust